Reer Somaliland oo sheegay in shirka Muqdisho fashil ku dhow yahay aanna laga siin doorkoodii.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda Waqooyiga Soomaaliya lana safan guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa qaadacay heshiiska Doorashada ee la filayo in Berri lagu saxiixay xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho.
Qoraal ay soo saareen ayey ku caddeeyeen inaan Guddoomiyaha Aqalka Sare laga qeyb gelin shirkii ugu danbeeyay wax talo ahna aysan ku lahayn, qeybna ka ahayn go’aanada lagu gaaray Shirka wadatashiga Arrimaha doorashada dalka.
Waxay kaloo shaaciyeen inay go’aan ka qaadan doonaan, dibna kasoo sheegi doonaan mowqifkooda oo shacabka Soomaaliyeed u so bandhigi doonaan.
Wararka ayaa sheegaya inuu guddoomiye Cabdi Xaashi cadaadis kala kulmay Ra’iisal wasaaraha iyo madaxweynayaasha Puntlnad iyo Jubbaland oo ku tirtirsiiyey inuu tanaasulo, isla markaana soo magacaabo kala bar Guddiga maamulka Doorashada xildhibaannada Waqooyi iyo xubin ka mida Guddiga Heer Federaal ee Doorashada.
ODEYGA XAASHI DABIN SAYAASADEED AYUU DHAX FADHIYAA OO WA TII HOREY LOO YIRI “LO LUGUHEEDA AYAY ISKU BIYA GEFISAA” ODEY CABDI XAASHI WUXUU IS DHAAFINAYAA FURSADA UU HAYSTO OO AH 5 XUBNOOD OO GUDIGA SOMALILAND, HADII UU KU ADKEYSTO GO,AANKIISA WAXAA FURSAD HELI MAHDI GULEED OO AH NABAD IYO NOLOL WIXII OO DHAN JEEBKA GASHAN DOONA ,CABDI XAASHINA LOO JOOJIN MAAYO OO WAA SHAQSI XILDOON AH KELIGIINA MA MATHALO SOMALILAND WAXAA LAHAYSTAA DAD KALE REER SOMALILAND AH, AWALBA XILABAANADA SOMALILAND WAXAA LAGU XULI OO LAGU SOO DHISI DOONA DHEENTADA AFISYOONI . EE THIS IS YOUR LAST CHANCE MR XAASHI
Siyaasiinta Iidoor ee Muqdisho jooga awalba meesha waxaay badankood u joogeen, in aaysan Soomaaliya xasilin inta aay beeshoodu Dunidu ku qancineeyso in la aqoonsado oo aanan lagu lug xirin, Dal aanan weligii xasileyn!
Ninkii Soomaali ah oo taasi caddeeynteeda u baahanna, “Youtube” ha ka fiiro waxa aay ku hadleeyso, Edna Aadan oo ka qeyb gashay Shir Caalemi ah oo mar sii horreeysey “Brussels/Belgium ka dhacay!!
Baadidu nin baa kula daydayo Daalna kaa badane!
Aanna Dooni hayn inaad heshana Daa’im abidkaaye!
Dadkuna moodi Duul wada dhashoon wax u Dahsooneyne!
Dallase ma lahan Aakhiro haddii loo Kitaab Dayaye!!!!
Rag waa raggii hore, hadalna waa intuu yiri!!
Nasiib daraday ka mid tahay nin marti ahi doorasho ma leh waxii loo gartaa la siiyaa.
Ku Tafatiraha bogan.
Iska sax cinwaanka khalad iyo qadaf weyn ayaa ku jira, cid metesha shacabka iyo Dowlada Barakaysan ee somaliland ama ay u dirsatay Xamar ma jirto horena uma dhicin iminkana dhici mayso.
Somaliland waa dal gaara shuqul kuma laha waxa lagu kala boobayo Xamar ee labada reerood mid walba Haraga madhan dhinac u jiidanayo yacni Maxay ka ka nuugtaa oo ku nuugtaa Waa sheekada xamar taala.
Haw gefina shacabka sharafta leh ee Somaliland ee wax ku doorta QOF IYO COD(one man one vote).
Ninkii Somaliland doonayaa, ha furto shaashadda, ha daawado calamada, astaamha, khudbadaha, bandhigyda, iwm. God madow oo 6 nin isla gasho 1991 bay diiday shanties Golaha Sare, halkay marathon Africa ma gaadhin 6 cisho oo olole ah, qof ku dhinta iska daa ee bisad lama jiidhin, Alhamdullilah, Mahdi iyo Odayga dhacdhacaya ee Ina Xaashi ceeb bay u dhinteen, gabadha wanaagsan reerkooda bay la joogtaa, guryo dad ma dhex fadhido, xaafad uma wareegto xaafad kale, wakhti ha iskaga Luminina, adduunku wax waa arkaa, min Seylac ilaa Laascaanood Xuddun waa damaashaad iyo qof iyo cod, hebel baa qoraya goorma ayaa laga tegay, TV ga qaranka baa mucaaradku ka hadlaa toos oo Muse Biixi lagu dhaliilaa, Democratic waa martabad la gaadgo, odayga, islaanta, inanta, wiilka Somaliland joogaa cidna uma soo magacaowdo madaxweyne iyo xildhibaan, uma garaadsan waxaan doorasho ahayn. Bakhtigiina iska cuna , xaarmaajo haydinku kaadsho, Alhamdullilah Alhamdullilah Alhamdullilah